Famokarana sy fivarotana ny indostrian'ny milina fanjairana any Shina amin'ny taona 2020
Ny famokarana sy ny varotra, ny fanafarana ary ny fanondranana masinina any Shina dia nihena tamin'ny taona 2019
Ny fangatahana fitaovana lamba sy fitafiana (ao anatin'izany ny milina lamba sy milina fanjairana) dia nitohy nihena nanomboka tamin'ny taona 2018. Ny vokatr'ireo milina fanjairana indostrialy tamin'ny taona 2019 dia nidina hatramin'ny haavon'ny 2017, 6,97 tapitrisa eo ho eo ny singa; tratry ny fihenan'ny toekarena eto an-toerana sy ny filan'ny sandan'ny fitafiana midina, sns. Tamin'ny taona 2019, 3,08 tapitrisa unit ny varotra ao an-trano, 30% eo ho eo ny fihenan'ny isan-taona.
Raha ny fahitan'ny orinasa an-jatony maro, tamin'ny taona 2019, orinasa miisa 100 an'ny milina fanjairana indostrialy no namokatra singa 4,170.800 ary namidy singa 4,23 tapitrisa, miaraka amin'ny tahan'ny fivarotana 101,3%. Voakasiky ny fifanolanana ara-barotra any Sino sy Etazonia ary ny fihenan'ny fangatahana iraisam-pirenena sy ny eto an-toerana, ny importa sy ny fanondranana ireo milina fanjairana indostrialy dia nihena avokoa tamin'ny taona 2019.
1. Nidina ny vokatra milina fanjairana indostrialy ao Shina, miaraka amina orinasa 100 mitentina 60%
Raha ny fahitana ny vokatra azo avy amin'ny milina fanjairana indostrialy eto amin'ny fireneko, ny taona 2016 ka hatramin'ny 2018, eo ambanin'ny kodiaran-droa amin'ny fanavaozana ny vokatra indostrialy sy ny fanatsarana ny fanambinana ny indostria any ambany, dia nahatratra haingana ny vokatra azo avy amin'ny milina fanjairana indostrialy fitomboana. Ny vokatra tamin'ny taona 2018 dia nahatratra 8,4 tapitrisa unit, avo indrindra tao anatin'ny taona vitsivitsy. sandany Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Fikambanan'ny Masinina Manjaitra China, ny vokatra tamin'ny milina fanjairana indostrialy teto amin'ny fireneko tamin'ny taona 2019 dia manodidina ny 6,97 tapitrisa unit, fihenan'ny 17.02% isan-taona, ary nilatsaka tamin'ny 2017 ny vokatra.
Tamin'ny taona 2019, ireo milina vita amin'ny hazondamosina miisa 100 notadiavin'ny fikambanana dia namokatra milina fanjairana indostrialy 4,170 tapitrisa, fihenan'ny 22,20% isan-taona isan-taona, mitentina 60% eo ho eo amin'ny vokatra totalin'ny indostria.
2. Mihombo ny tsenan'ny milina fanjairana indostrialy, ary mitohy ho kamo ny varotra ao an-trano
Nanomboka tamin'ny 2015 ka hatramin'ny 2019, ny varotra anatiny an'ny milina fanjairana indostrialy dia nampiseho fironana miovaova. Tamin'ny taona 2019, voakasiky ny fitomboan'ny tsindry ambany amin'ny toekarem-pirenena, ny fiakaran'ny ady amin'ny varotra Sino-Etazonia, ary ny hamaroan'ny tsena, ny filana ambany ny fitafiana sy ny fitafiana hafa dia nihena be, ary ny varotra ao an-toerana amin'ny fanjairana fanjairana dia haingana. nihena ho fitomboana ratsy. Tamin'ny taona 2019, ny varotra ao an-toerana ny milina fanjairana indostrialy dia manodidina ny 3,08 tapitrisa, fihenan'ny 30% isan-taona, ary somary ambany noho ny 2017 ny varotra.
3. Nihena ny famokarana milina fanjairana indostrialy ao amin'ny orinasa 100 ao Shina, ary ny tahan'ny famokarana sy ny varotra dia mihodina amin'ny ambaratonga ambany.
Raha ny antontan'isa momba ny orinasa milina feno miisa 100 nozanahin'ny Fikambanana milina fanjairana China, ny varotra milina fanjairana indostrialy avy amina orinasa miisa 100 feno tamin'ny taona 2016-2019 dia nampiseho fironana miovaova, ary 4,23 tapitrisa ny isan'ny varotra tamin'ny taona 2019. Raha ny fahitana ny taham-pamokarana sy ny varotra dia ambany noho ny 1 ny tahan'ny famokarana sy ny varotra milina fanjairana indostrialy an'ny orinasa milina feno miisa 100 amin'ny 2017-2018, ary niainan'ny indostria ny fihoaram-pefy.
Tamin'ny telovolana voalohany 2019, dia mihamafy ny famatsiana milina fanjairana indostrialy ao amin'ny indostria, miaraka amin'ny taha 100% ny famokarana sy ny varotra. Hatramin'ny telovolana faharoa 2019, noho ny fihenan'ny fangatahana eo amin'ny tsena dia nihena ny famokarana orinasa ary nitohy ny fisehoan'ny tranga mihoatra ny tinady. Noho ny fahamalinan'ny toe-java-misy eo amin'ny indostria amin'ny taona 2020, tamin'ny telovolana fahatelo sy fahefatra 2019, ny orinasa dia nandray andraikitra mba hampihenana ny famokarana sy hampihena ny lisitra, ary hihena ny tsindry amin'ny firaketana ny vokatra.
4. Nihena ny fangatahana iraisam-pirenena sy anatiny ary samy nihena ny fanafarana entana sy ny fanondranana
Ny fanondranana ireo vokatra milina fanjairan'ny fireneko dia anjakan'ny milina fanjairana indostrialy. Tamin'ny taona 2019, ny fanondranana ireo milina fanjairana indostrialy dia nahatratra 50%. Voakasiky ny fifanolanana ara-barotra any Sino sy Etazonia ary ny fihenan'ny fangatahana iraisampirenena, ny fitakiana isan-taona ho an'ny fitaovana fanjairana indostrialy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia nihena tamin'ny taona 2019. Araka ny angon-drakitra avy amin'ny General Administration of Customs, nanondrana indostrialy 3,893 800 ny indostria milina fanjairana amin'ny taona 2019, fihenan'ny 4,21% isan-taona, ary ny sandan'ny fanondranana dia 1,227 miliara dolara amerikana, fiakarana 0,80% isan-taona.
Raha ny fahitana ny fanafarana milina fanjairana indostrialy, nanomboka ny taona 2016 ka hatramin'ny 2018, ny isan'ireo mpanafatra milina fanjairana indostrialy sy ny sandan'ny fanafarana dia nitombo isan-taona, nahatratra 50 900 unit ary US $ 147 tapitrisa tamin'ny 2018, ny sanda avo indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. . Tamin'ny taona 2019, 46.500 ny volan'ny fampidirana amina masinina fanjairana indostrialy, miaraka amin'ny sandan'ny fanafarana 106 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 8,67% ary 27,81% isan-taona.